Ahoana no handrefesanao ny varotra atiny? | Martech Zone
Alarobia, Jolay 24, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity dia sary tsara tarehy avy amin'ny Brandpoint momba ny fandrefesana ny fahombiazan'ny marketing amin'ny atiny. Tsy ny atiny rehetra no hamoaka varotra, fa ny momentum sy ny fanangonana atiny dia tena mitondra fanentanana ary fandinihana, amin'ny farany mankany fiovam-pony.
Tetika marketing amin'ny atiny toy ny lahatsoratra bilaogy, lahatsoratra asongadin, kopian'ny tranonkala voatsara, taratasy fotsy, atiny media sosialy ary famoahana gazety no mampihetsika ny mpanjifa amin'ny làlana manokana. Ny varotra atiny dia miteraka fahatsiarovan-tena amin'ny marika, vokatra na serivisinao; mitaona ny mpanjifa hirotsaka sy handinika anao; manova azy ireo ho firaka sy varotra; ary mamorona mpisolo vava.
Tags: fanentananafandinihanaContent Marketingfiovam-po
Manatsara ny fandoavam-bola isaky ny Click Click ny mpifaninana
Jul 25, 2013 amin'ny 12: 00 AM
Misaotra an'ity. Mandrefy ny marketing amin'ny atiny izahay amin'ny alàlan'ny Google Analytics sy ny fampidirana ny GNIP.